लक डाउनमा के गर्दैछन्, ‘कृषिका अध्यक्षहरू’ - eagronews.com
लक डाउनमा के गर्दैछन्, ‘कृषिका अध्यक्षहरू’
By eagronews २६ चैत्र २०७६, बुधबार ०५:०४
नेपाल हब्र्स तथा हर्बल एसोसिएसन (नेहफा)
“नीति नियमको अध्ययन गर्दैछु”
सरकारको आर्थिक ऐन कानुन, खासगरि बन र जडीबुटी उद्यमसँग सम्बन्धित नीति नियम तथा भू उपयोग नीतिको बारेमा अध्ययन गरेर लगभग सकेँ । अहिले पनि तिनै विषयमा अध्ययन गर्ने, बुँदाहरू टिपोर्ट गर्ने र रिपोर्ट तयार गर्ने काम गरिरहेको छु । सरकारका कर नीति, साना तथा मझौला उद्यमसँग नीति नियमहरूको बारेमा पनि मसिनोसँग अध्ययन गरेँ ।
त्यसबाहेक दैनिक रूपमा साथीहरूसँग करिब २ घण्टा भिडिओमा छलफलमा गर्छौँ । दैनिक ४ देखि ५ बजेसम्म नेहफाका साथीहरूबिच छलफल हुन्छ । त्यस्तै ५ देखि ६ बजेसम्म उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सम्बन्धित साथीहरूबिच भिडिओ छलफल गर्ने गरेका छौँ । सामाजिक सञ्जाल, टेलिफोन र पुस्तकहरूले समय बिताउने माध्यम बनेका छन् ।
डा. सितलकाजी श्रेष्ठ
अध्यक्ष, नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन
साथीहरूसँग दैनिक रूपमा नै छलफल गर्ने गरेका छौँ । भेटेरीनरी चिकित्सक साथीहरूलाई कुनै खालको समस्या छ भने समाधानको लागि पहल गर्नको लागि एसोसिएसन जहिले पनि तयार छ । तर, यो बेलामा हामीले सकेसम्म जनतालाई सहज हुने गरी काम गर्नुपर्छ भनेर आव्हान गरेका छौँ । र, हरेक साथीहरू आ—आफ्नो ढङ्गले काममा खटिइरहनु भएको छ ।
हामीले सामाजिक सञ्जालमा ‘एनभिए च्यालेन्ज’ भनेर एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । त्यो सडकका पशुंपंक्षीलाई कुनै कुरा खुवाएर त्यसको फोटो पोस्ट गर्ने कार्यक्रम हो । यो ‘च्यालेन्ज’ कार्यक्रमले सडकका कुखुरा, गाई, बाँदर लगायतका पशुहरू तथा परेवा लगायतका पंक्षीहरुलाई पनि केही हदसम्म भए पनि खानेकुराहरू पाएका छन् । अहिले तपाइसँग कुरा गर्दा पनि म सङ्कटा मन्दिर परिसरमा परेवा र कुखुराहरूलाई बिस्कुट लगायतका दानाहरू खुवाइरहेको छु ।
अध्यक्ष, घाँस विकास सङ्घ
मेरो फार्म नवलपुरको गैँडाकोटमा तर, घर काठमाडौँमा । त्यसैले फार्ममा जान सकेको छैन । सुरुका केही दिन फार्म पूर्णरुपमा बन्द गरियो । अहिले कर्मचारी साथीहरूले पूर्ण सुरक्षा अपनाएर काम गरिरहनु भएको छ । अहिलेको समय जै वर्षिम लगायतका हिउँदे घाँसको बीउ सङ्कलन गर्ने समय हो ।
यो बेला बीउको जोहो गर्न सकिएन भने हिउँदे घाँस रोप्न सकिँदैन । त्यसैले साथीहरूले सरकार र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको दुरी र मापदण्ड अपनाएर काम गर्न थाल्नु भएको हो ।
फार्ममा जान नपाएपछि घरमै बसेर समय बिताइरहेको छु । पेसागत रूपमा घाँससँग सम्बन्धित किताबहरू पढिरहेको छु भने इतिहांससंग केही किताबहरू पढिरहेको छु । सरदार भीमबहादुर पांडेको किताब त्यस वखतको नेपाल दोहोर्‍याएर पढेँ ।
अध्यक्ष च्याउ उत्पादक किसान सङ्घ नेपाल
भक्तपुरमा बस्ने भएकोले यतै छु । जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घले उपभोक्ता र किसानको बिचमा ‘पुल’को काम गरिरहेको छ ।
त्यसको लागि भक्तपुरका सूर्य विनायक र चाँगुनारायण नगरपालिका भित्रका विभिन्न क्षेत्रका किसानहरूको घरदैलोमै पुगेर उनीहरूको कृषि उपज सङ्कलन वा खरिद गर्ने र विभिन्न चोकहरूमा पुगेर सहुलियत दरमा विक्री गर्ने गरेका छौँ ।
हाम्रो अभियानमा ती दुवै नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू र स्थानीय प्रशासनले पनि साथ दिइरहेका छन् । यसबाट भक्तपुरका किसान र उपभोक्ता दुवैले राहत पाएका छन् भन्ने मलाई लागेको छ । मुख्यतः अहिले लकडाउनको समयमा बिहानदेखि साँझसम्म यही काममा व्यस्त छु । त्यसबाहेक च्याउ किसानहरूसँग टेलिफोनमा सम्पर्क गरेर पनि लामै समय बित्ने गरेको छ
मानिसहरू अरिङ्गाललाई किन मन पराउँदैनन् ?
अङ्गुरको मौसममा कोरोना कहर : तर पनि ढुक्क किसान